Antilles Frantsay-Gaza: Ankivy Ara-toekarena Ataon’i Israely Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2018 4:50 GMT
Amin'ny fomba isankarazany, maneho ny firaisankinany amin'ireo mponina ao Gaza ireo Antilles frantsay sy ny ao Karaiba hatramin'ny fiantombohan'ny ady. Tamin'ny fiantombohan'ny volana Janoary, efa nampitain'ny tontolon'ny bilaogy frantsay sy amin'ny fiteny Kiriola ireo fihetsika sy hevitr'ireo mponina eo an-toerana, miaraka amin'ireo antso hanao fihetsiketsehana [amin'ny fiteny frantsay], tao Martinika, ireo fandraisana andraikitra [amin'ny fiteny frantsay] ara-tsaina sahala amin'ny an'i Raphaël Confiant, ary ireo antso hanaovana asa fanohanana nalefan'ny vondrom-piarahamonina silamo an'i Goadelopa.
Na teo aza ny kilometatra maromaro manasaraka azy ireo amin'ny Afovoany Atsinanana, ny ankamaroan'ireo Karaibiana dia naneho ny fangorahany an'ireo mponina ao Gaza, hita naratra na maty teony anaty fàfan'ny fahitalavitra. Izany fangorahana izany dia nohazavain'i Zandwonis tao anatin'ny fandraisany fitenenana nanoloana ny goadelopeana iray mpanao politika mikasika ny fanafihana israelianina ataony amin'i Gaza [amin'ny fiteny frantsay], ny 12 Janoary:
Comment, à l'époque de la globalisation, du « village mondial », voulez-vous que nous ne soyons pas solidairNahoana, amin'ny fotoanan'ny fanatontoloana, ny “tanàna manerantany”, no tadiavinareo tsy hiraisanay hina amin'ireo ankizy 350 novonoin'ny tafika israeliana? Tianareo ve izahay Goadelopeana, vahoaka teraka avy amina fanandevozana, vahoaka napetraka eto amin'ity tany ity taorian'ny famonoana an'ireo Amérindiens, tianareo ve raha marenina sy moana manoloana an'ireo zava-doza miantraika amin'ireo olombelona ao Afovoany-Atsinanana?
Manazava amin'ny ampahany ny fanohanana midadasika eo an-toerana io amin'ny fanapahankevitry ny filoha venezoelana Hugo Chavez : tamin'ny fandroahana ny masoivohon'i Isiraely tao Venezoela, naneho ny fanohanany an'i Palestina izy sy ny governemantany. Tao anatin'io blaogy io, [amin'ny fiteny frantsay], mitanisa ny hevitr'ilay Martinikey, mpanoratra Raphaël Confiant, i Mabool, izay niarahaba [ny filoha Chavez] ny fanapahankevitra venezoelana. Tao anatin'ny kabariny, mitondra ny lohateny hoe “Tokony hanaraka ny ohatr'i Venezoela ireo firenena afrikana sy Karaiba” [amin'ny fiteny frantsay], izay naely be tokoa, maneho izao hevitra izao i Raphaël Confiant:
Vao avy natoron'ny filohan'ny revolisiona boliviana Hugo Chavez antsika indray ny làlan'ny fahamendrehana sy ny fanoherana, tamin'ny fandroahana ny masoivoho israeliana ao Venezoela.
Na nisy aza fanambaràna naha-be adihevitra ny fampitsaharana ny ady, tsy nilamina tamin'io fanapahankevitra io ny mponina tao amin'ireo nosy Antilles frantsay. Io no manazava ny fanentanana iray farany indrindra niseho tao Martinika, izay mikendry ny fanohanana ireo tra-doza ao amin'ny lemak'i Gaza sy mba handefasana ireo “valifaty” eo amin'ny sehatra ara-toekarena amin'i Israely.
Nanontanianay toy izao ny blaogy CaribCreoleOne [amin'ny fiteny anglisy]: “ireo Karaibiana ve no namatsy ara-bola ny ady israeliana?”. Ho an'io blaogy io, ny valiny dia hita ao amin'ireo trano goavana roa fivarotana fanaka sy fitaovana mandeha haerinaratra anà vondron'orinasa iray miasa ao Goadelopa, ao Martinika ary ao Goiàna: Conforama sy But. [manerana ny ao an-toerana], misy ireo tsaho mikasika ny fanohanana ara-bola ataon'ireo mpitondra telo ao amin'ilay vondrona izay tompon'ireo magazay ireo ao Karaiba amina fandresena lahatra mpomba an'i Israely. Noho izany dia ampitandremana fatratra no hanaovan'ny blaogy CaribCreoleOne an'ireo rohy heverina ho misy eo amin'ireo mpitondra sy Israely ireo, mialohan'ny hamintinany amin'ity fanontaniana farany ity:
Azo fintinina ve hoe ny vola izay nolaniantsika tamin'ireo trano fivarotana Conforama sy But ireo dia natao hamatsiana ireo baomba amin'ny faosiforo izay nalatsaka tamin'ireo olontsotra palestiniana? Tsy lany andro ilay fanontaniana ary mendriky ny hosaintsainina.